विभिन्न घटनामा तीनको मृत्यु
मुख्य पृष्ठवाग्मतीविभिन्न घटनामा तीनको मृत्यु
चितवन, ३ असोज । जिल्लाका विभिन्न घटनामा आज तीनजनाको मृत्यु भएको छ । कोरोनाको संक्रमण, सर्पको डसाइ र दुर्घटनामा परी तीनजनाको मृत्यु भएको हो ।
चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा एक महिलाको कोरोना संक्रमणका कारण आज बिहान मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका-९ की ५१ वर्षीया महिला रहेकी छन् ।
कलेजका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालका अनुसार श्वासप्रश्वासमा समस्या आई भदौ २८ गते भर्ना भएकी उनमा २९ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । कोभिड सघन उपचार कक्षमा उपचारका क्रममा उनकोे आज बिहान ६ः१५ बजे मृत्यु भएको हो ।
यस्तै पिकअप भ्यानको ठक्करले एकजनाको मृत्यु भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका–६ गीतानगरबाट सिताराम चोकतर्फ आइरहेको लु१च ४४३५ नम्बरको भ्यानले प्रदेश २-०३-००६ प ७७६१ नम्बरको मोटर साइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको हो ।
मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका-२३ का ३७ वर्षीय ज्योती दराई रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ठक्करबाट घाइते उनको उपचारका क्रममा आज बिहान भरतपुर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो । दराईलाई ठक्कर दिने सवारी र चालक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् ।
यता सर्पले डसेर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुईजना उपचारका क्रममा रहेका छन् । मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका–१९ का २ वर्षीय रायन रामदाम रहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार उनलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा विषालु सर्पले डसेको थियो । सर्पको डसाईपछि उनको उपचारका क्रममा चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो ।
यस्तै सर्पको डसाईका कारण उनका हजुरआमा ५६ वर्षीया केशरी विक र आमा २३ वर्षीया रुवी सुनारको. अवस्था गम्भीर रहेको छ । उनीहरुमध्ये विकको चितवन मेडिकल कलेज र सुनारको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।